CAFFEE - (Sadaasa 23, 2014): Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa 16ffaan akka Naannoo Oromiyaatti boru Sadaasa 24 bara 2014 Magaalaa Finfinneetti kabajama. - Friday, 03 December 2021
Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi baajata mootummaa raggaasuu dabalatee murtiiwwan adda addaa dabarsuun mootummaa dhaabbataa hundaa'eef aangoo dabarsuun hojiisaa xumuure.
Caffeen Bara Hojii 1ffaas, Naannoo Filannoo 177 Oromiyaan yeroo sana qabdu irraa miseensota lama lama filatamaniin teessoo 354 qabu keessaa, buufata filannoo tokko irraa namni tokko qofti filatamuun teessoo 353n (dhiira 341 (% 96.6), dubartoonni 12 (%3.4), Waxabajjii Bara 1987 Yaa'ii Duraa gaggeesseen Heera Mootummaa Naannichaa raggaasuun hojiisaa jalqabe. Heerri Mootummaa Naannichaa ragga'e kun rakkoo walmakiinsa aangoo qaamolee lamaanii ture sana hiikuuf hin dandeenye.
Caffeen kun, mootummaa dhaabbataa naannichaa yeroo jalqabaaf kan hundeesseefi turtiisaa waggoota shanan (1987-1992) keessattis seerota 36 kan tume yommuu ta'u, kanneen keessaa seeronni 19 gurmaa’iina irratti kan xiyyeeffataniifi 17 immoo seerota hojimaata, baajata raggaasuufi dhimmoota waliigalaa irratti xiyyeeffatan baasuun hojiisaa xumuure.
Caffee Bara Hojii 2ffaa, filannoo bara 1992 gaggeeffameen naannoo filannoo 179 Oromiyaan qabdu irraa, miseensota sadii sadii filatamaniin teessumni Caffee gara 537 (dhiira 467 (%86.9) dubartii 70 (%13.1)tti akka ol guddatu ta'ee, Yaa’ii Hundeeffamaa Fulbaana 27-28 Bara 1993 gaggeessuun hojiisaa jalqabe.
Caffeen kun, hanga Bara 1994 Heerri Naannichaa fooyya’utti bifuma baratameen qaamoleen lamaan Pireezidaantii Naannichaan hoogganamaa kan turan ta'us, walmakiinsi aangoo qaamolee kanneenii qorannoo gaggeeffameen hojii irratti rakkoo uumuun isaa hubatamee qaamoleen kun (qaamni seera baastuufi seera raawwachiiftuu), Yaa’ii Ariifachiisaa 1ffaa Onkoloolessa 18 Bara 1994 Heerri Naannichaa Labsii Lak. 46/1994n akka fooyya'u taasifamee, Heericha Keewwata 46 jalatti ammoo aangoofi hojii qaamolee Mootummaa lamaanii addaan baasuun irraa deebiidhaan bifa haarawaan gurmaa'inni qaamolee mootummaa /qaama seera baaftuu, raawwachiiftuufi hiiktuu/ ta'ee akka ijaaramu taasifame.
Heera fooyya'e Keewwata 50 jalatti immoo, qaamni seera baaftuu naannichaa maqeeffama 'CAFFEE MOOTUMMAA NANNOO OROMIYAA’ jedhuun akka waamamu ta'ee, Caffeen, gurmaa'ina mataasaa (Afyaa’iifi I/A/Afyaa’ii, Koreewwan Dhaabbiifi gurmaa’inaalee biroo) akka qabaatu akkasumas, Labsii Waajjira Caffee Oromiyaa hundeessuuf bahe Lak. 47/1994n Waajjirri Caffee Oromiyaas addatti of danda’ee akka hundaa’us taasifame.
Bu'uuruma kanaan, Caffeen gurmaa’inaalee adda addaa kan akka Koree Qindeessituu Caffee, Koree Mari'achiiftuu Caffee, Koreewwan Dhaabbii Caffeefi kkf Labsii Akkaataa Gurmaa’iinsa, Hojiifi Sirna Walgahii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Lak. 55/1995n seeraan yeroo jalqabaaf addatti akka gurmaa'u ta’e. Gurmaa'ina Koreewwan Dhaabbii Caffee yeroo sanaa ilaalchisee, Koreewwan Dhaabbii sadii (3) (Koree Dhaabbataa Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa, Dhimma Dinagdeefi Hawaasummaa) kan miseensota 42 (dhiira 35 (%83.3)fi dubartii 7(%16.6)) of keessaa qabu yeroo jalqabaaf hundeessuun hojiin hordoffiifi to'annoo kurmaana kurmaanaafi Yaa'iin Caffee immoo waggaatti yeroo lama bifa idilaa’een akka gaggeeffamu taasifamee.
Walumaa galatti Caffeen kun turtiisaa waggaa shanii keessatti, Yaa'ii Idilee 11fi Ariifachiisaa 1 taa’uun seerota 68fi murtiiwwan adda addaa dabarsuun bara hojiisaa xumuure.
Caffeen Bara Hojii 3ffaa, bu'aa filannoo biyyaalessaa Caamsaa 1997 gaggeeffameefi filannoo itti guutinsaa Ebla 2000 gaggeeffameen miseensota sababa adda addaan harca’an 20 filachuun teessoo Caffichaa guutuu taasisuun naannoo filannoo 179 irraa miseensota sadi sadii filatamaniin 537 (dhiira 341 (%63.5), dubartii 196 (%36.5)n kan hundaa’e yommuu ta’u, haata’uutii Caffee Bara Hojii 3ffaa kana keessatti Paartiileen Siyaasaa shan (5), hirmaachuun waliigalaan teessoon 137 (%25.7) paartiilee morkattootaan kan qabame ture.
Caffeen kun, Yaa'ii Duraa Fulbaana 26-28 Bara1998 gaggeesseen gurmaa'ina Caffichaa, Labsii Lak. 55/1994 hojiirra ture Labsii Lak. 106/1998n fooyyessuun baay’ina Koreewwan Dhaabbii sadii turan gara jahaatti akka ol guddatu taasisuun miseensota korichaa waliigalaan 42 keessaas 11 dubartoota turani. Dabalatanis, Labsii Lak.153/2001 baheen koreewwan haaraa lama dabaluun baay’inni isaanii gara saddeetiitti akka ol guddatu taasisuun baay'ina miseensota koreewwan dhaabbii 42 tures gara 48tti akka ol guddatu taasifameera.
Hojiiwwan muummeyyii Caffee keessaa ijoon karooraafi raawwii hojii qaamolee Mootummaa hordofuufi to’achuu yommuu ta'u, kunis hojiilee bulchiinsa gaarii, ol’aantummaa seeraafi misoomaa mirkaneessuuf qaamolee mootummaan karoorfamaniifi baajanni hojii kanaaf barbaachisu waggaa waggaan Yaa’ii Caffeetiin ragga’an akkaataa karoorfameen hojiirra ooluu isaanii hordofuun hojii xiyyeeffannoo olaanaan kennameefi raawwatamaa tureefi jirudha.
Walumaagalatti, Caffeen kun Yaa'iiwwan Idilee 14fi Ariifachiisaa tokko gaggeesseen, seerota 57fi murtiiwwan adda addaa dabarsuun hojiisaa xumuure.
Caffeen Bara Hojii 4ffaa, teessoo 537 (dhiira 382 (%71), dubartii 155 (%29))n, Yaa'iisaa Duraa Hagayya 13 Bara 2002 taa’een Afyaa’iifi I/A/Afyaa’ii filachuun hundaa’uun turtiisaa waggoota shanii keessatti Yaa'ii Idilee 13fi Ariifachiisaa tokko gaggeessuun seerota 32fi murtiiwwan adda addaa raggaasuun hojiisaa xumuure.
Toorbee kana 9696
Ji'a kana 7412
2008 irraa eggalee 5044900
CAFFEE - (Sadaasa 23…
___//___ Afyaa'iin Caffeen Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurahmaan, Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti kabajamu ilaalchisee miidigaaleef ibsa kennaniiru. Guyyaan kun, "Obbolummaan Tokkummaa Sabdaneessummaaf!" mata duree jedhuun bara kana ni kabajama...